Galaadi Iyo kooxdii Abaabulka Waxbarashada - Cakaara News
Galaadi Iyo kooxdii Abaabulka Waxbarashada
Galaadi(cakaaranews)Jimce 23ka, september 2016. Kooxdii iskudhafka ahayd ee abaabulka waxbarashada ee kasocotay xafiiska waxbarashada DDSI oo ay waheliyaan qaarkamid ah mas’uuliyiinta gobolka doolo oo uu horkacayo Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Doolo mudane Mallow Ibraahim Cabdi ayaa shirar wacyigalin iyo abaabulka waxbarashada ah kasameeyay degmada Galaadi ee Gobolka Doolo.
Hadaba, Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Doolo mudane Mallow Ibraahim Cabdi ayaa sheegay in ay si wadajir ah shirar kaladuwan oo ah wacyigalinta iyo abaabulka waxabarashada ay kasameeyeen degmada galaadi ee gobolka doolo. Wuxuuna xusay mas’uulku in shirarka ay sameeyeen ay udhanaayeen bulshada qaybaheeda kaladuwan islamarkaana lagulafaguray faaiidoyinka ay waxbarshadu leedahay iyo dhibaatooyinka jahligu leeyahay waxayna bulshada galaadi kudhaqan, kooxda iyo masuuliyiinta Gobolka iyo degmaduba islaqaateen in laduwaangaliyo islamarkaana caruurta dadoodu gaadhay lageeyo dugsiyada waxbarashada.
Sidookale, hogaamiyaha kooxda Abaabulka waxbarashada ee kasocotay xafiiska waxbarashada mudane Maxamed Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in abaabulkii waxbarashada gobolka doolo ay si habsami leh u wadaan islamarkaana ay abaabul balaadhan kasameeyeen degmada galaadi iyagoo shirar kaladuwan uqabtay bulshada qaybaheeda kaladuwan si loo diwaangaliyo loona geeyo goobaha waxabarashada caruurta dadoodu gaadhay waxbarshada. Wuxuuna intaa kudaray in ilaaiyo hada aysanlakulmin wax caqabad ah.
Dhankakale Madaxa Xafiiska Waxbarashada Degmada Galaadi mudane Maxamed Xuseen Maxamuud ayaa tilmaamay in bulshada degmaduay sifiican ugu dhiirantahay waxbarashada islamarkaana ay bilaabeen diwaangalintii ardayda. Wuxuuna xusay in kooxda abaabulka wada ee kasocotay xafiiska waxbarashada DDSI ay si heersare ah usameeyeen abaabulkoodii waxbarashada ee ku aadanaa degmada Galaadi iyaguna ay sifiican ulashaqeeyeen.
Sikastaba ha haatee, kooxda abaabulka waxbarashada gobolka Doolo ayaa si habsamileh u siiwada hawlihii loo idmaday ee ahaa wacyigalinta iy abaabulka waxbarashada.